L'email ayaa muddo dheer isu taagtay habka ugu muhiimsan ee isgaadhsiinta ee wareegyada xirfadlayaasha. Farimahaagu waa inay ka jawaabaan summada saxda ah waana inay si taxadar leh u qoraan. Tababarahaaga Nicolas Bonnefoix ayaa ku bara hababka loo qoro iimaylo habboon oo kooban. Markaad dejiso yoolalka, waxaad arki doontaa sida loo helo qaataha inuu wax akhriyo. Qaado qaab xirfad leh oo go'aansan adiga oo ku mahadsan sida wanaagsan ee odhaahda iyo ereyada. Faham muhiimadda ay leedahay codka togan iyo xeerarka xushmada. Sidoo kale baro hawlaha ka hor intaadan dirin iimaylka, oo ay ku jiraan hubinta waxa ku jira iyo lifaaqyada, iyo dirida qaataha. Dhammaadka tababarkan, waxaad awoodi doontaa inaad qorto iimaylo heer-xirfadeed oo buuxiya xeerarka isgaarsiinta ee jira.
Qor emayl xirfadle ah Diisambar 12, 2020Tranquillus
READ Qor qeexitaan wax ku ool ah!
horeQor warqad dabool ah
socdaAbuur CV iyo warqad dabool leh ereyga 2016